Fomba fanaovana sidina hanalavirana ny fiarovana ny Touch ID | Vaovao IPhone
Andro vitsy lasa izay dia hitantsika ny fomba nahombiazan'ny vondrona hackers alemanina iray hialana amin'ny fiarovana ny mpamaky ny rantsantanana (Touch ID) an'ny iPhone 5s miaraka amina dingana somary "tsotra". Taorian'ny fanatanterahana andian-dingana miaraka amin'ny sarin'ny dian-tanan-tànana, ny vokatra dia hoditra sentetika faharoa izay apetraka amin'ny rantsantanana hafa, ny Touch ID dia manondro ny tany am-boalohany, mamoha ny iPhone mamela ny fividianana hatao.
Ao amin'ny horonan-tsary mitondra ity lahatsoratra ity dia afaka jerenao ireo dingana tokony harahina hahatratrarana ny tanjon'ny hadalana amin'ny Touch ID. Mazava fa miasa mafy izy io ary tsy ny olon-drehetra no afaka mahazo ireo fepetra takiana mba hahatratrarana ny tanjona, na izany aza, ny "tutorial" dia efa eo amin'ny Internet ary izay te hanokan-tena ho azy dia efa manana ny fampahalalana ilaina rehetra hatao ao an-tranony izany.
Amin'ny tena fiainana dia mazava fa tena sarotra (raha tsy tsy azo atao) ny tena ahafahan'izy ireo manangona ny dianay, fa araka ny filazantsika azy dia eo ny mety. Mampiseho izany fa ny Touch ID dia tsy mety diso eny azo antoka lavitra noho ny mampiasa kaody isa na teny miafina.
Mino aho fa ianareo rehetra hanana iPhone 5 dia afaka matoky momba ny fepetra fiarovana natolotry ny mpamaky ny rantsan-tànana. Tsy azo idirana izy io nefa saika saika tsy azo atao izany hahafahan'izy ireo manangona ny dian-tananay, mahafantatra ny rantsantanana marina, mangalatra ny iPhone, ...
Fanazavana fanampiny - Izy ireo dia mahavita mandingana ny fiarovana ny mpamaky rantsantanana iPhone 5s amin'ny alàlan'ny rantsantanana sandoka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 5s » Io no fizotran'ny famoronana ny dian-tànana hanalavirana ny fiarovana ny Touch ID
idanrecords dia hoy izy:
Efa napetraka, azonao atao koa ny maka tahaka ilay kaody, sa tsy izany?
Mamaly amin'ny idanrecords
Vondron'ireo mpijirika ??? Tsy maintsy polisy avy ao amin'ny departemantan'ny siansa izany.
Inona no hacker an'izany ao an-tranony?
uLySeSS dia hoy izy:
Namoaka lahatsoratra miaraka amin'ny hevitro aho, sao misy liana: http://misapuntesde.com/post.php?id=278
Valio amin'i uLySeSS
Fa maninona no mividy 5s ry zareo raha te-hitsipaka ilay mpamaky ny rantsan-tànana ka mijanona 5
Heveriko fa tsy izany no izy. Nahita horonantsary aho (tsy fantatro raha ity) ary nalaina avy tao anaty vera ny dian-tànana, noho izany dia tsy sarotra ny mahazo azy. Avy eo ny fizotrany manontolo sy ny sisa.
Saingy misy zavatra iray tena lehibe, ary izany dia raha sendra olana ianao, dia sarotra kokoa ho an'ny polisy-mpisolovava na mitovy aminao ny manery anao hiditra ny kaody, toy izay ny "tsy nahy" mametraka ny rantsan-tànanao amin'ny iPhone ...
Tsy afaka mamoaka lahatsoratra ianao eto
milaza fa tsotra ny rafitra, ary avy eo mamoaka lahatsoratra hafa toa izao ary milaza fa sarotra be izany raha tsy tsy azo atao. Ary kely kokoa ny mifanohitra amin'ny tenany amin'ny lahatsoratra 2.
Tsotra ny rafitra, lava nefa tsotra satria izay manolotra azy dia mahavita azy. Tsy midika izany fa sarotra (raha tsy azo atao) ny fomba ananan'izy ireo mangalatra ny mombamomba ny iPhone.
Raha manana fotoana malalaka 30 ora ianao ary te-hanao ny fitsapana amin'ny iPhone 5 anao manokana dia azonao atao izany.
Andeha hojerentsika, zavatra iray tsotra na sarotra, tsy afaka ny ho roa izy ireo. Fantatro ny tianao holazaina, fa raha sarotra amin'izy ireo ny mangalatra ny maha-ianao anao amin'izany fomba izany, dia satria sarotra ny fizotrany, samy maka ny dian-tànana ary manatanteraka ny fizotrany rehetra.
Tsotra? Miankina amin'izany, ny ranoka manamboatra, ny mpamorona sns izay ampiasain'izy ireo mandritra ny dingana dia tsy amidy na aiza na aiza, tsy dia mora loatra ny mahazo azy io amin'ny voalohany ary fantatry ny olona izay ataony. Ny dingan'ny famongorana iPhone dia tsotra, raha fantatrao ny fomba sy ny fahaiza-manao.
Ny tiako holazaina, raha tsy misy bebe kokoa, dia hoe tsotra na sarotra io. Azo atao ve? Eny, efa hitantsika izany, saingy tsy midika izany fa mora ny manatratra azy. Mazava ho azy fa dingana sarotra sy sarotra azo. Efa nolazaiko anao fa na dia manana 30 ora aza ianao ary ny fitaovana ilaina rehetra (izay handoavanao vola amin'ny fahitana azy ireo) dia tsy azonao izany ao anatin'ny 30 ora na amin'ny voalohany. Tsy manana ny iPhone 5s aho, fa raha nanao izany aho dia mba hampisehoana fa tsy misy mahavita azy ny olona, ​​farafaharatsiny "mora" araka ny fahitana azy.
Toa araka ny fahitako azy, fa ny ataon'izy ireo dia ny fanaovana sary sokitra na mitovy aminy, mamadika ny loko ka ny asidra dia mihinana ny zava-drehetra afa-tsy ny alahelonao amin'ny dian-tongotra. Avy eo miaraka amin'ny vy amin'ny dian-tongotrao, dia lakaoly azy io mba hahavitana elastika sy malefaka. Tena tsara, mihevitra fa mihoatra izany na kely aza, ny asidra hampiasana dia lafo, faharoa, ny fanaovana izany arak'io fomba io dia sarotra, raha laninao ny asidra dia mihinana metaly betsaka kokoa noho ny tokony ho izy izy ireo, raha tsy mahomby ianao tsy handeha. Ny fiheverana an'io dia efa sarotra, ny fiheverana fa manome anao dian-tànana tonga lafatra indrindra indrindra fa mila mamoha ny telefaona ianao, izay efa sarotra koa.
Ho an'ny iray na ny iray hafa, dia toa sarotra izany, eny na eny.
Saika tsy misy, ataonao ao anatin'ny fotoana fohy ao an-trano izany ary azo antoka fa hivoaka amin'ny voalohany!
Ny fialan-tsiny azafady noho ity fanehoan-kevitra ity, nefa tsy te-hanafintohina, dia aza mieritreritra fa ireo izay manana iPhone ihany no mitsidika ity pejy ity, ireo mpangalatra ihany koa, ary indraindray ireo mpangalatra no manana fidirana bebe kokoa amin'ny vokatra an'arivony izay anaovany izany avy amin'ny horonantsary, ny tolo-kevitro fa hamafa avy hatrany ny lahatsoratra ianao.
Heveriko fa misy zavatra tsy mety ao amin'ilay horonan-tsary, rehefa mametraka ny rantsan-tànany amin'ilay fitaovana mainty ilay olona faharoa dia mahazo miditra amin'ny efijery fanovana izy, fa rehefa esorina ilay fitaovana mainty, na dia esoriny aza ny fiarovana ny dian-tànana dia miafara amin'ny kaody 4 isa. Manoro hevitra anao aho handinika ilay horonantsary. Efa nanandrana ny hadisoan'ny nomerika 4 tao amin'ny SOS tamin'ny iPhone misy iOS 7 aho fa mbola misy ny lesoka, saingy tsy misy ny fidirana rehetra nananako taloha (tsy afaka miditra amin'ny sary intsony aho, na ny horonan-tsary, na ny fifandraisana, sns ... izay no nitranga tamin'ny iOS 6). Saingy mamela ahy hiantso ihany io. Heverina fa efa nahalala an'ity lesoka ity ny paoma ary mikasa ny hanitsy azy ireo amin'ny fanavaozana izy ireo! 😄